nomaniny ho solon'izay fanompoana
Version 0.5.0 – Indray ny
Martsa 24, 2010 amin'ny tolotra 7 Comments
Ankehitriny dia efa afaka v0.5.0 izay somary lehibe iray fiovana ho amin'ny plugin araka ny lafin-javatra roa manolotra izay nangataka ny maro.
Ny voalohany dia ny fampidirana ny tahiry ao anatin'ny fanompoana ny plugin. Afaka misafidy ny na manually manohana ny, manana ny tahiry natao ho anao isan'andro, na mamela ny tahiry hitranga velona. Backup no nataony ho olombelona ihany teny, ary amin'ny fomba mivantana tahiry, ny plugin mandefa fotsiny ny fandikan-teny vaovao ny tahiry fanompoana.
Izany asa fanompoana tahiry Nihazakazaka an-tampon'ny ny Google appengine foto-drafitr'asa, ka ny tena haingana sy scalable.
Ny lafiny faharoa dia ny faobe handika toerana, ankehitriny dia tafiditra ao anatin'ny toe-javatra transposh pejy. Afaka voa fotsiny ny “Dikanteny rehetra izao” bokotra ary ny pejy sy ny lahatsoratra ho nadika ho anao, tsikelikely fa azo antoka fa. Mariho fa ny fandikan-teny atao eo amin'ny lafiny mpanjifa, fa tsy ny lafiny serveur sy ny ampy latency ka tsy misy tahotra ny Server miteny ratsy ny fandikan-teny mandeha ho azy service.
Ny famotsorana manaraka mankany amin'ny 0.6.0 Version dia mifantoka bebe kokoa amin'ny ny mpampiasa (mpandika teny) traikefa sy MULTI-lingual bilaogy wrtiting integrations.
Ny hevitra dia nandray foana, fanehoan-kevitra eto fotsiny, na handeha ho any trac.transposh.org.
Nametraka Under: Release filazana Tagged Miaraka: nomaniny ho solon'izay fanompoana, fanaraha-maso foibe, fanafahana, Trac, WordPress plugin
Changeset amin'ny Transposh-WordPress [c4740c0]: Eny, tokony reset ny Yandex tranombarotra taratasy fanomezam-pahefana koa ny fanovana. Desambra 5, 2018
Changeset amin'ny Transposh-WordPress [2fb9f69]: Wordpress 5 Mampiasa wp-json hamoaka Stuff to, tsy tokony hiezaka ny ... Novambra 23, 2018
Changeset amin'ny Transposh-WordPress : PHP 7.2 deprecated create_function, dia izao no fotoana izao iray tsy fantatra anarana ... Novambra 23, 2018
Changeset amin'ny Transposh-WordPress : PHP 7.3 manana fomba hafa ho - Char in preg teny, dia in ... Novambra 23, 2018
Changeset amin'ny Transposh-WordPress [d4911aa]: Bing nanampy Telugu Novambra 23, 2018
tolotra amin'ny Version 1.0.3 – Nahoana ianareo no tsy mandefa hafatra aho?
Fabio amin'ny Version 1.0.3 – Nahoana ianareo no tsy mandefa hafatra aho?
ranomasimbe malalaka amin'ny Version 1.0.0 – Tonga ny fotoana